Sida loo rakibo Android Lollipop-ka Samsung Galaxy Note 3 | Androidsis
Sida loo rakibo Android Lollipop-ka Samsung Galaxy Note 3. Firmware Leak Samsung Android 5.0
Francisco Ruiz | | Samsung, Tababarada, Noocyada Android
Mar labaad, waa inaan u mahadnaqnaa asxaabta iyo asxaabta ka socota madasha horumarinta ugu wanaagsan ee Android ee waqtiga oo dhan, si loo helo daadinta asalka Samsung Android 5.0 Lollipop firmware Leak ee Samsung Galaxy Note 3 tusaale SM N9005. Labada nooc ee 16 Gb iyo qaabka 32 Gb labadaba. Madashu ma noqon karin wax kale oo aan ahayn tan Horumarinta XDA.
Casharka soo socda ee gacanta ku saabsan, waxaan ku barayaa sida saxda ah ee loo maro cusbooneysii Samsung Galaxy Note 3, moodeelka SM N9005 a Samsung Samsung Lollipop asal ah iyada oo la adeegsanayo daadinta firmware xaday dhowr maalmood ka hor. Looma baahna in la yiraahdo ama la xuso taas aniga iyo Androidsis midkoodna mas'uul kama aha waxa ku dhici kara korantadaada Android, inkasta oo haddii aad raacdo tilmaamaha warqadda oo aad buuxiso dhammaan shuruudaha lagama maarmaanka ah, waxaad gacanta ku cusbooneysiin kartaa muddo dheer ka hor inta OTA aysan diyaar u ahayn in la soo diro, Samsung Galaxy Note 3 ilaa Android 5.0 Lollipop.
Ka hor intaadan sii wadin casharkaan iyo soo degsashada feylasha lagama maarmaanka u ah Samsung Galaxy Note 3 waxay u cusbooneysiisay Samsung Lollipop-ka asalka ah ee Samsung, waa inaad qaaddaa taxaddarro gaar ah oo aan hoos ku taxidoono:
Meeshu ha ku rarnaato 100 × 100.
Ha si wadayaasha Samsung si sax ah loo rakibay. Tani waad heleysaa rakibidda Kies iyo isku duubnida Samsung Galaxy Note 3 markii ugu horeysay.
Ku kaydi sawiradaada barnaamijyadooda xogta iyo wax walboo aad rabto inaad keydiso maadaama howsha cusbooneysiinta wax walbo aad waayi doontid
Kaydso faylka asalka ah ee PIT ee Samsung Galaxy Note 3.
1 Sida loo kaydiyaa faylka asalka ah ee 'PIT' ee Samsung Galaxy Note 3
2 Faylasha loo baahan yahay in lagu cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Note 3 SM NV9005 Samsung Lollipop-ka rasmiga ah ee Samsung.
3 Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Note 3 si rasmi ah Samsung Android Lollipop
3.1 Habka 32 Gb
4 Habka 16 Gb
Sida loo kaydiyaa faylka asalka ah ee 'PIT' ee Samsung Galaxy Note 3
Kahor intaadan bilaabin inaad ku shubto Android 5.0 Lollipop Samsung Galaxy Note 3 model SM N9005, waa lagama maarmaan in la sameeyo nuqul nuqul faylka asalka ah ee PIT haddii ay dhacdo inaan ku weyno intaan ku guda jirno howsha biligleynaya.
In la sameeyo keydkan waa Waa lagama maarmaan in la rakibo Android ADB, tan awgeed waxaan ku qasbanaan doonnaa oo keliya rakibi Android SDK taas oo durba faylasha ku sidata ADB.
Marka ADB la rakibo, waa inaan galnaa amarka isla markaana guji amarradan:
adb jiido /sdcard/My-N9005.pit
Mar haddii la fuliyo waxaan horey uheli doonaa nuqul ka mid ah feylka PIT oo kujira sdcard-ka Samsung Galaxy Note 3, waanu koobiyeeynaa oo waxaan ku heynaa meel aamin ah hadii aan u baahanahay mustaqbalka.
Faylasha loo baahan yahay in lagu cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Note 3 SM NV9005 Samsung Lollipop-ka rasmiga ah ee Samsung.
Firmware Leak Android 5.0 Lollipop
Marka labada fayl la soo dejiyo waxaan kala siibnaa shaashadda kumbuyuutarkeena shaqsiga ah ee leh Windows-ka diyaarna ayaan u nahay u cusbooneysii Samsung Galaxy Note 3-gaaga Android Lollipop iyadoo la raacayo tilmaamahan biligleyga ah ee kala-duwan ee loogu talagalay qaabka 32 Gb iyo qaabka 16 Gb ee lagu kaydiyo gudaha.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Note 3 si rasmi ah Samsung Android Lollipop
Waxaan ku shaqeyneynaa Odin rukhsadaha maamulka oo waxaan raacnaa tilmaamaha sida ku cad moodalka noo Samsung Galaxy Note 3:
Habka 32 Gb
Qaabka 32 Gb waa inaan dhignaa dhammaan faylasha sida aan ku arki karno shaashadda soo socota:
Waa in la adkeeyo in sanduuqa qaybinta ay tahay in la hubiyo.
Waxaan kaliya u baahanahay inaan gujino badhanka Start ee Odin oo sug samir inta hawshu dhamaanayso iyada oo aan laga goynin wax adduunka ka jira.
Markay dhamaatay Terminal-ka wuxuu dib u bilaabi doonaa inta udhaxeysa 10 daqiiqo iyo rubuc saacIn kastoo markii ay dhacdo, waxaad awoodi doontaa inaad aragto muuqaalka cusub ee asalka ah Samsung Android Lollipop interface.
Habka 16 Gb
Qaabka loo iftiiminayo qaabka 16 Gb waa ficil ahaan isku mid inkasta oo marka laga reebo taas weyn ma isticmaali doonno faylka 'Leak firmware PIT'. Sidaa darteed, sanduuqa PIT waa inuu ahaadaa mid madhan sida aan kuugu muujiyo shaashadda soo socota, isla waqtigaasna sanduuqa Dib-u-qaybinta sidoo kale waa in aan la hubin. Waxaan ku celiyaa PIT madhan iyo Dib-u-furid aan la hubin.
Hadda waa inaan riixnaa badhanka Start de Oden oo sug adigoon kajajabin howsha ifinta Firmware Leak Android Lollipop si ay udhameyso.
Si ka duwan qaabka 32 Gb, 16 Gb kan dhammaadka qalabka biligleynaya, waa inaan galnaa habka soo kabashada oo aan ku qasabnaa dib u soo celinta warshad. (Masax keddibna warshad).
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Sida loo rakibo Android Lollipop-ka Samsung Galaxy Note 3. Firmware Leak Samsung Android 5.0
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku sameeyo qoraalkeyga 3 SM-N900W8 🙁
Haye, ma ogi inaad ogaatay laakiin sawirka maba arki kartid feylasha gala sanduuq walba… .waxaa loo qaadanayaa magaca… laakin aan aragno hadii qof uu sameeyay… ..haha
Dhankeyga waan u tagayaa waxayna umuuqataa inay xannibantahay rarka AP laakiin aakhirka wey xareysaa ... waxaan u maleynayaa inay tahay arin marka horeba la tijaabiyo ... hada waan kuu sheegayaa.
Jawaab si Luis Nunez
ah ... waad ilaawday inaad tilmaamto inay tahay inaad kuxirto Odin qaabkii soo dejinta ... haddiiba ay dhacdo ...
Dhammaan waa qumman yihiin …….
1- Waxay qaadataa xoogaa (uguyaraan laptop-kayga) si aan uxoro AP file… laakiin way shubtaa.
2- Markay u muuqato inay dhammeyso oo ay leedahay RESET, ha ka jarin ... dib u bilaw terminaalka laakiin wali waxay ku shaqeyneysaa Odin (ugu yaraan aniga) sug ilaa PASS ay soo baxdo! ka dib waxay awoodi doontaa inay ka jarto (Waxaan uga tagay inay kuxirantahay ilaa ay dib uga soo kabato gabi ahaanba)
3- Waxay qaadataa 10 daqiiqo in dib loo bilaabo gebi ahaanba, kiiskeyga waxaan u maleynayaa inay qaadatay waqti ka yar (waa 32gb)
4- Waxaan u rakibey Terminal cusub sidaa darteed waan nadiifiyey Apps….
5- Ku raaxayso.
Waad ku mahadsan tahay Francisco waxtarkaaga Year Sannad Wanaagsan!
iyo damaanad qaadka? lumay?
Miyaan ku rakibi karaa qoraalkayga galaxy 2?
Waxay u adeegtaa qoraalka galaxi 3 sm n900w8 waa nooca snapdragon 4g
Hagaag ... waxay sifiican ugu socotaa qoraalkayga 3 marka laga reebo dhowr waxyaalood:
Isku xirka xogta badanaa wuu ku guuldareystaa Shabakada, WiFi wuu socdaa, waxaan dhihi lahaa si ka wanaagsan sidii hore iyo marka loo eego WiFi, ma jirto wado looga dhigo in lagu keydiyo furaha sirta ah, markasta oo aan damiyo ama aan ka baxo, waa inaan isdiiwaangaliyo WiFi mar kale.
sm-n900w8 Waxaan isku dayi doonaa qoraalkan 3-da ah haddii aanan furin
emilo, hadii ay shaqeyso ii sheeg tan iyo markii aan dhowr jeer isku dayey
hadday suurtagal tahay tusaalahaas xusuusta ah?
Ma kuu shaqaysay?
Jawaab Jose Luis
Si aad u hagaajiso qaladka Wifi, waxa ay tahay inaad sameyso waa kuwan soo socda, waa inaad u badashaa qiimaha ro.securestorage ee faylka build.prop inuu noqdo mid been abuur ah, feylkaas wuxuu ku jiraa xididka nidaamka, gudaha galka nidaamka, salaan.
Sida asxaabta kale, waxaan horeyba ugu tijaabiyay qoraalkeyga 3 sm.n900w8 mana shaqeynayo, waxay calaamadeysaa qalad kujira PIT-ka taleefanka iyo howlgalka Odin Re-Partition oo fashilmay.
Caawinta cusboonaysiinta XUSUUSKA 3 SM-900W8
isla markiiba garaac taleefanka (jeeg aamin ah godka uu ku dhaco)
calaamadda ODIN (Hawlgalkii Dib-u-Qaybintu wuu fashilmay.)
mana awoodin inaan rakibo haddii qof ku guuleysto qaabka SM.N900W8, fadlan noo sheeg sidaad horay u sameysay.
Waxaan ka helayaa qalad isku mid ah godka guuldarada
qof ayaa isku dayay inuu calaamadeeyo dib-u-bixinta oo uusan ku dhejin faylka PIT ... waxaa laga yaabaa inuu ka shaqeeyo n900w8 boosteejada
n900w8 boosteejooyinka waxay isku dayaan: hubinta dib-u-soo-celinta oo aan la dhigin faylka PIT. faallo sida aad tahay !!
suurta gal ma tahay in dib loogu noqdo kitkat adoo sii maraya ota?
Mmmm .... dib ugu noqo Kit Kat ... isku xirka xogta wuu xumaadaa ... WhatsApp mararka qaar ayuu tagaa laakiin kaliya qoraalka, sawiro aan macquul aheyn in la diro, kaarka WiFi ma badbaadiyo iyaga waana dhib in la dhigo wax walboo Waqtiga, mugga hoose illaa gariirka laakiin lama aamusiin karo ama gariiri karo ama codad lama bixin karo ... haddii kale qoraalkeyga 3 deluxe, oo leh kala duwanaanta 'Nova launcher', qaabeyn iyo xawaare aad u wanaagsan.
Julio Chavez dijo
haye walaal waxaan heystaa 16 GB OGEYSIIS wuuna i siiyaa PIT waxay ii sheegtaa inay qalad ku bixineyso kiiskan sidaan yeeley sidoo kale waa inaan galiyaa feylka godka 16 gb si ay u dhaafaan ama ay i dhaawici karto fadlan ii sheeg !
Jawaab Julio Chavez
fadlan waxaan ubaahanahay galka efs ee qoraalkayga III sm n9005 5.0
Ma ogtahay inaad rakibi karto nooca sm-n900w8?
Kuwa doonaya inay isku dayaan lollipop waxaan u maleynayaa inay fiicnaan laheyd in la rakibo Rom caadadiisa inta asalka uu soo baxayo maxaa yeelay ilaa iyo hada waxbo ma qaban karno: / kaliya iska sug.
Ku jawaab raxiel
Sidaan u fahmay, nooca telcel sm900w8 ayaa loo cusbooneysiin doonaa lolipoo iyada oo loo marayo ota bisha Abriil xaalad kasta ha noqotee haddii qof wanaag sameeyo, ha u daabacaan mahadsanid
Cumar cv dijo
Waa salaaman tahay Manuel, sidee ku heshay macluumaadkaas? Waxaad sugi doontaa ama cusbooneysiin doontaa gacanta. Salaan…. Waxaan dareemayaa inay fiican tahay in la sugo walaal.
Jawaab Cumar Cv
Salaan baa jira! Waxaan hayaa codsi aan ku weyddiiyo, waxaan tijaabinayay kaalmada amniga ee qoraalkayga galakeyga 3 waxaana si kama 'ah u taabtay "force shutdown" waana naafo ahayd. Ma jirtaa waddo mar labaad lagu kicin karo? Aad baad u mahadsantahay, salaan !!
Jawaab Ana Laura
Alexander Taborda dijo
Saaxiibkay ... waan khafiifiyay taleefankayga casriga ah ... waa 9005gb n16, wax walbana waan sameeyay si sax ah ... Waan ka saaray qaybtii dib u qaybinta oo godka maanan dhigin, qaladkii wuu helay »iNVALID Ext4 IMAGE» «Volume is too too weyn »... caawimaad yar ma xuma
Jawaab Alejandro Taborda
KidzInMind, ama sida looga tago Android-geena carruurteena yar yar oo leh dhammaan nabadda maskaxda adduunka
Waxaan wareysaneynaa hal-abuurayaasha Guudjob